मर्जरमा इन्सेन्टिभ जरुरी छैन | Business and Economy of Nepal
मर्जरमा इन्सेन्टिभ जरुरी छैन
Posted on September 18, 2011 by Babukrishna
भारतबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको अध्ययन पूरा गरेका महाप्रसाद अधिकारी हाल नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटि गभर्नर छन् । स्पष्ट वक्ताका रुपमा चिनिनु हुने अधिकारीलाई नेपालको बैकिङ क्ष्ँेत्रका बारेमा नेपाल समाचारपत्रका बाबुकृष्ण महर्जन गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ः
हालै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अझ सशक्त बनाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहज रुपमा तरलता प्रवाह नगर्ने एवम् वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउनुपर्ने लगायतका सुझावहरु दिएका छन् । यस सुझावलाई राष्ट्र बैंकले कस्तो रुपमा लिएको छ ?
–संसारभरिका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था सक्षम रुपमा सञ्चालन रहुन भन्ने आइएमएफको सरोकार रहन्छ । नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा के कस्ता अप्ठ्याराहरु छन् भन्ने मूल्यांकन गरेर आइएमएफले त्यस्तो सुझाव दिएका हुन् । राष्ट्र बैंकलाई बलियो बनाउनको लागि राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ल्याएर अझ सशक्त बनाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था घटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो त्यसैले विगत दुई वर्षदेखि नयाँ आवेदन लिने कार्य रोकिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरमा हामीले विशेष जोड दिएका छौं । मर्जर सजिलो बनाउन विनियमावली समेत ल्याइसकेका छौंं । हाम्रो उद्देश्य वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने मात्र नभएर प्रणालीलाई बलियो बनाउने पनि हो । समग्रमा भन्नुपर्दा आइएमएफको सुझावलाई राष्ट्र बैंकले सकारात्मक रुपमा नै लिएको छ ।
मर्जरमा जोड दिए पनि सहुलियत दिइएन भन्ने आरोप छ नि ?
मर्जरमा कुनै इन्सेन्टिभ हुनै पर्छ भन्ने होइन । मर्जर भनेको व्यापारिक प्रक्रिया हो । संसारमा भएका कैयौं मर्जर एन्ड एक्विजिसनका घटनाहरु राज्य वा केन्द्रीय बैंकले इन्सेन्टिभ दिएर मात्रै भएका होइनन । दुई संस्थाबीचको व्यापार आवश्यकताको कारण मर्जर हुने हो ।
यहाँ सरकारले एवम् राष्ट्र बैंकले समेत केही सहुलियत दिन्छु भन्ने पनि कुरा ल्यायो । यसको अर्थ राज्यले यस्तो नीति लियो कि नेपालमा संस्था धेरै भएकाले मर्जरमा जानुपर्ने हुँदा तुरुन्त नआउन सक्छ भनेर ल्याएको हो । नेपालका बैंक लगानीकर्ताहरु जिम्मेवार नभएको हुँदा यस्ता सुविधा दियो भने पो मर्जरमा आकर्षित हुन्छन् कि भनेर ल्याएको हो । मर्जरको लागि सुविधा नै दिनुपर्ने प्रचलन अन्य देशमा कमै पाइन्छ । हामीले जे जति दिने भनेका छौं त्यो बैकिङ प्रणालीको लागि ‘भ्यालु एडिसन’ हो ।
कमजोर कमजोर संस्था
ख र ग वर्गमा अझै तरलता स्थिति सहज देखिदैन । यसको समाधान कसरी सम्भव होला ?
बैकिङ प्रणालीमा ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने वाणिज्य बैंकहरुमा तरलताको स्थितिमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । तर ख र ग वर्गका वित्तीइ संस्थामा भने तरलता सुधार अझै हुन नसकेको सही हो । ती संस्थाहरुको विश्वासमा सुधार ल्याउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । क वर्गको स्थिति हेर्ने हो भने श्रावण र भाद्र डेढ महिनामा करिब सवा १४ अर्ब रुपियाँ निक्षेप थपिएको छ । त्यस्तै साढे १२ अर्बले कर्जा बढेको छ । यो भनेको निक्षेपको तर्फ निकै ठूलो फड्को हो । क वर्गले तरलतामा धेरै राहत महसुस गरिरहेका छन् । तिनीहरुसँग भएका अत्यधिक तरलता ख र ग वर्गलाई अन्तर बैंक कर्जामार्फत समेत प्रवाह भइरहेको छ । ख र ग वर्गमा अझै पनि प्रसस्त सुधार आउनु जरुरी छ । दीर्घकालमा ख र ग वर्गले ग्रँहकका माझ विश्वासिलो बनाउनु नै जरुरी छ ।
व्याज आर्जन हुने खाता खोल्न नहुने निर्देशनपछि वित्तीय संस्थाको विरोध रहयो । अहिलेको अवस्थामा यो कत्तिको जायज छ ?
– हामीले गत वर्ष नै वाणिज्य बैंकले अर्को वाणिज्य बैंकमा व्याज आर्जन हुने खाता खोल्न रोक लगायौं । गत वर्ष ख र ग वर्गको वित्तीय संस्थामा तुरुन्तै नगरिएको मात्र हो । यो गत वर्षकै निरन्तरता मात्र हो । त्यो ल्याउनुको आधारभूत कारण मुख्य चार कारण छन् । पहिलो कारण दोहोरो निक्ष्ँेप गणना हो । यो खुल्ला रहँदा अस्वभाविक रुपमा नक्कली डिपोजिट बढ्ने देखियो । अर्को दोस्रो कारण त्यस्ता निक्षेपका कारण प्रणालीमा धेरै खालका विकृतिहरु पनि देखा परे । एउटा संस्थाबाट अर्को संस्थामा निक्षेपको रुपमा राख्ने र उक्त निक्ष्ँेपलाई चाहेको मान्छेलाई प्रयोगमा लगाउने गरेको पाइयो । यसबाट बैकको सुशासनमा पनि ठूलो असर परेको देखियो । तेस्रो कारण भनेको बैंकको उद्देश्यसँग सम्बन्धित छ । बैंक भनेको जनताबाट निक्षेप संकलन गरेर आवश्यक भएका जसले उद्योग धन्दालगायत अन्य उत्पादनजन्य काम गर्न चाहन्छ त्यसलाई ऋण प्रदान गर्नु हो । अर्को शब्दमा वित्तीय मध्यस्धताको काम गर्ने नै बैंक हो । जनताबाट निक्षेप संकलन गरेर ऋण प्रवाह नगरी अर्को वित्तीय संस्थमा पुनः निक्ष्ँेपकै रुपमा राख्दा ठूलो रकम निष्क्रिय रुपमा रहने भयो । आवश्यकता परेको जनताको माझमा नगएर आएको निक्ष्ँेपलाई अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्र पार्किङ गर्दा वित्तीय मध्स्थताको त कुनै अर्थ रहेन । वित्तीय मध्यस्थताको कसरत नगरी चुप लागेर व्याज मात्र खाएर बस्ने बेठिक मनस्थितिलाई ठिक गर्न पनि यो निर्देशन ल्याइएको हो । चौथो कारण भनेको निक्षेपको पूर्ण परिचालन होस् भन्ने उद्देश्य यसमा निहित रहेको छ । यी सबै कारणले गर्दा हामीले यो निर्देशन ल्याएका हो । यस नीतिका कारण आफूसँग रहेका निक्षेपको अर्को संस्थामा रहेर तत्काल व्याज प्राप्त गर्न नसकिने हुँदा तत्काल नाफादायकतामा केही असर त गर्छ तर त्यसको लागि हामीले अन्य वैकल्पिकम लगानीका क्षेत्र खुला गर्नुपर्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा जान संस्थाहरुलाई कुनै समस्याको कुरो भएन । अन्य संस्थामा पार्किङ नै गर्नुपर्ने खालको परिदृश्य पनि हाम्रो होइन । एकातिर चाहि तरतलाको समस्या छ भन्ने र कैयौं बैंकहरु तरलता समस्यामा छ भन्ने अर्कोतिर चाहि केही संस्थाहरु आफूसँग भएका निक्षेप अन्य संस्थामा पार्किङ गरेर राख्ने । यो पनि त सही कुरा भएन नि । त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने जरुरी नै देखेर हामीले यो कदम चालेका हौं । नाफादायकतामा सुधार ल्याउन हामीले अत्यधिक कोष भएका संस्थालाई सरकारी ऋणपत्र र राष्ट्र बैंकसँग भएकै पनि अन्य ट्रेजरी बिलहरु किन्न दिने पक्षमा छौं । राष्ट्र बैंकको उद्देश्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा घटोस् भन्ने कदापी होइन, प्रणालीमा सुधार आओस् विकृति नआओस् भन्ने नै हो ।
मौद्रिक नीतिको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव होला ?
मौद्रिक नीतिले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ वा सकिंदैन भन्ने कुरा धेरै आन्तरिक वा बाह्य कुराहरुमा भर पर्छ । सरकारको बजेट कहिले पास हुन्छ, सरकारले कहिलेबाट खर्च गर्न शुरु हुन्छ त्यसमा पनि भर पर्छ । समयमै बजेट पास भएर खर्च भएको अवस्थामा मौद्रिक नीीतले तोकेको ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, ५ अर्बको शोधनान्तर स्थिति कायम राख्न कुनै समस्या छैन । जहाँसम्म मुद्रास्फितिको कुरा छ, मुद्रास्फितिलाई एउटा निश्चित तहमा राख्नै पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो किनभने यो प्रत्यक्ष्ँ रुपमा सबै जनमानसलाई असर पार्ने विषय हो । हाम्रो बशभन्दा बाहिर पनि कैयौं कुराहरु हुन सक्छन् । सबै मन्त्रालय र निकायको सहयोग चाहिन्छ । राष्ट्र बैंकको वित्तीय उपकरणले मात्रै मुद्रास्फिति नियन्त्रणमा आउँदैन । अन्य सबै कुराहरुको समन्वयान्त्मक भूमिका राम्रो रह्यो भने यो लक्ष्य हासिल हुन्छ । अन्य निकायहरुको समन्वयात्मक भूमिका रहेन, बाहिरको वस्तुस्थिति सुध्रिएन, उत्पादनमा सुधार भएन भने यो ७ प्रतिशतको मुद्रास्फिति हासिल गर्न गा¥हो हुन्छ ।
वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वको लागि के गर्न सकिन्छ ?
वित्तीय प्रणालीमा कुनै पनि एउटा संस्था धराप भयो भने सबै प्रणालीका संस्थाहरु समस्या पर्छन् । त्यही हिसाबले प्रणालीले द¥हो बनाउने हाम्रो प्रयास हुन्छ । यसै सिलसिलामा हामीले पुँजीसँग सम्बन्धित निति नियमलाई बलियो बनाएका छौं । जोखिम न्युनिकरण मार्गदर्शन जारी गरिएको पनि समग्र वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वको लागि नै हो । त्यही मार्गदर्शनमा बसेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जोखिमलाई न्युनिकरण गनुपर्छ भनेका छौं । त्यस्तै तरलतासँग सम्बन्धित निर्देशनहरु पनि जारी गरिएको छ । तरलतालाई नियमित अनुगमन गर्ने काम हामीले गरेका छौं । सुपरिवेक्षण क्षमतालाई हामीले विस्तारै बढाउँदै लगेका छौं । हामीले बेलामा हाम्रा नीति नियमलाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्दै बासेल–२ को अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त अनुसार नीति नियमहरु बनाएका छौं । अधिकांश नियमहरु पालना पनि भएको अवस्था छ । यिनै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरु राम्रोसँग लागू गर्न सकियो भने वित्तीय स्थायित्व कायम हुन्छ ।
अन्तर बैंक कारोबारमा पनि राष्ट्र बैंकले नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेको छ नि ?
साधारणतया अन्तर बैंक ऋण ७ दिनको लागि दिने गरिन्छ । सञ्चालक समितिको सिफारिसमा १ महिनासम्म लम्ब्याउन सकिन्छ । तर एक महिनाभन्दा बढी अन्तर बैंक ऋण दिन पाउँदैन भन्ने हाम्रो व्यवस्था हो । यो बैंक बैंक बीचको अल्पकालीन कारोबार हो । बैंक बैंक बीच अन्तर बैंक मार्फत कारोबार होस् भनेर हालै मात्र राष्ट्र बैंकले अन्य वित्तीय संस्थामा व्याज आम्दानी हुने निक्ष्ँेप राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो । अन्तर बैंक ऋण महिना दिनमा पनि नउठ्नु भनेको ऋण लिनेलाई समस्या पर्नु हो । यहाँ केही संस्था समस्यामा परेको कारणले अर्को अन्तर बैंक ऋण दिएको समस्या फस्यो । फसिसकेपछि अन्तर बैंक ऋण दिने संस्थाको सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा यो निर्देशन आएको हो । त्यस्तो ऋण एकपटक नोक्सानी व्यवस्था गर्दा गा¥हो पर्ने ठानेर असोजमा २५ प्रतिशत, अर्को त्रैमासिकमा २५ प्रतिशत, चैत्रसम्म अर्को २५ प्रतिशत र चालु वर्षको असारसम्म सम्पूर्ण रकमको नोक्सानी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छौं । यो फसिसकेको अन्तर बैंक कर्जाको लागि मात्र हुँदा एक आपसमा विश्वास वातावरण बिग्रने खालको छैन ।
सानिमा विकास बैंकलगायतका बैंकहरुको स्तरोन्नतिको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ ?
एक तह भन्दा माथि स्तरोन्नति गर्न नपाउने निर्देशन आएपछि कतिपय वित्तीय संस्था स्तरोन्नति प्रक्रियाबाट बाहिरिएका छन् । त्यस्तै एक तह माथि गर्नेहरुको सवालमा पनि राष्ट्र बैंकले सोही निर्देशनमार्फत निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने शर्त अघि सारेको छ । स्तरोन्नति हुन निश्चित काम गरेर निश्चित दायित्व भइसकेको हुनुपर्ने भनेको छ । यसको मतलव माथिल्लो तहको काम गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गरिसकेको हुनुपर्ने बताएको छ । त्यस्तो क्ष्ँमता भन्नाले मानवीय स्रँेत, पुँजीको आकार, निक्षेपको आकार, ऋणको आकार, ग्रँहक संख्या, शाखा संख्याको हिसाबले पनि माथिल्लो स्तरको छेउछाउ पुगेको हुुनुपर्ने हो । सो निर्देशनमार्फत हामीले ऐनमा भएको माथिल्लो तहमा स्तरोन्नति हुने प्रावधानलाई थप सरलीकृत गरेका छौं । यसले गर्दा जो पायो त्यही तुरुन्त स्तरोन्नति गरेर आउने कुरा चाहि भएन । यो निर्देशन ल्याउने सिलसिलाले पनि हामीलाई अलिकति समय लगायो । यो निर्देशन आइसकेपछि हामी निवेदनको प्रशोधन गर्न लाग्यौं । निवेदन परेकाहरुको विशेष निरिक्षण गरी सुशासनको अवस्था कस्तो छ, मानवीय साधनको अवस्था कस्तो छ लगायतको जाँच ग¥यौं । यस्तो जाँच गर्दा कुनै कुनै संस्थाहरु स्वतः अयोग्य देखिए । कुनै कुनै संस्था योग्य देखिदैमा स्वीकृति दिइ हाल्नुपर्ने पनि कुनै आवश्यकता छैन । योग्य देखिएकाहरुको अझ अध्ययन गर्ने कार्य चाँहि पाइपलाइनमा छ ।
« ग्रामीण विकास बैंक मर्जरतिर पोहोर साल भन्दा ८ अर्ब बढी नयाँ नोट »